१००विकिदिन - Meta
"#100wikidays" एक व्यक्तिगत चुनौती हो, जसमा कुनै व्यक्तिले १०० दिनसम्म लगातार (कम्तिमा)दैनिक एक लेख निर्माण गर्ने उदेश्य लिन्छ । सामान्य सिद्धान्त र नियमहरू "#100happydays" चुनौती। यो जनवरी १६, २०१५ मा सुरू भयो र यसले $2 विकिमापिडितहरू $1 बनाएको छ ।
यस पासोमा पर्न सक्नुहुनेछ ! $1
छल्न पाइने छैन! (तपाईँ आफैलाई छलिरहेको हुनुहुनेछ )
कुनै दिन पनि छुटाउन पाइने छैन र कुनै भरपाई हुनै छैन ।
कुनै पनि लेखहरूको पूर्व तयारी हुने छैन ।
रमाईलो गर्नुहोस र प्रसन्नता बाँड्नुहोस !
तपाईँले #100wikidays ह्यासट्याग सम्पादन सारंश र सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ । फेसबुक ह्यासट्याक पाना
तपाईँ यहाँ जोडिन सक्नुहुन्छ
निम्न लेख सिर्जना गर्दै
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=100wikidays/ne&oldid=23336215"